भूमिगत समूह छाडेका व्यक्ति अपराधमा, उद्देश्य बैंक लुट्ने
जनकपुरधाम, २४ पुस– विगत केही वर्ष अगाडिसम्म तराई–मधेसमा भूमिगत रहेका प्राय सशस्त्र समूह अहिले निष्क्रिय छन् । तर त्यस्ता समूहमा लागेका केही व्यक्तिहरु भने पुनः आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन थालेका छन् ।
भूमिगत समूह छाडेर सामान्य जीवनमा फर्किएका भनिएका त्यस्ता व्यक्तिले अहिले छुट्टै गिरोह खडा गरेर अपराधिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिरहेका भेटिएको छ । सरकारसँगको वार्तापछि सामान्य जीवनमा फर्किए पनि जीवनयापनका लागि अन्य विकल्प अंगाल्न नसक्दा उनीहरु पुनः अपराधिक कर्ममै फर्किन थालेका घनुषामा भएका केही घटनाबाट प्रमाणित हुन्छ ।
१० मंसिर २०७४ मा सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित निर्दना घाट भन्ने स्थानमा ३ जना व्यक्तिहरुको समूहले एक जना म्यादी प्रहरी र एक जना प्रहरी जवानलाई गोली प्रहार गरे । सडकमा प्रहरीले चेक जाँच गरिरहेको अवस्थामा मोटरसाइकलमा सवार तीनजनाले चेकजाँच गर्न खोज्दा प्रहरीमाथि गोली प्रहार गरेका हुन् । गोली प्रहारबाट म्यादी प्रहरी आदर्श कुँवर र प्रहरी जवान मायाराम यादव घाइते भए ।
गोली प्रहार गरी फरार हुनेहरु थिए, धनुषा शहीदनगर नगरपालिका वडा नं. १ बेमर्खीका ३२ वर्षीय शिवकुमार राय, २८ बर्षका मनोज कुमार राय र १८ बर्षका सुरेन्द्र कुमार राय । उनीहरुलाई धनुषा प्रहरीले ११ मंसिर २०७४ मा धनुषा शहीदनगर– २ स्थित चिरैया चोकबाट पक्राउ गर्यो । ज६प ९०५६ नम्बरको मोटरसाइकलसहित १५० ग्राम ब्राउन सुगर र १ थान चाइनिज पेस्तोल समेत प्रहरीले उनीहरुबाट बरामद गर्यो ।
प्रहरीले अनुशन्धानबाट पक्राउ परेका शिवकुमार राय विगतमा सशस्त्र समूहमा लागेको पाइयो । सप्तरीका अजय त्यागीको नेतृत्वमा गठन भएको ‘मधेसी भाइरस साइलेन्ट किलर्स’ नाम भूमिगत समूहमा आवद्ध थिए राय । भूमिगत समूहमा हुँदा प्रहरीको वान्टेड सूचिमा परेका राय २०६४ सालमा सम्पन्न भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन पछि २०६५ सालमा पासपोर्ट (राहदानी) बनाइएर राय वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी गएका थिए ।
४ बर्ष पछि घर फर्किएका रायले विवाह समेत गरे । र पुनः ३ महिना पछि फेरि रोजगारीका लागि साउदी गए । तर, दोस्रो पटक भने गएको १४ दिनमै फेरि स्वदेश फर्किए । त्यसपछि पुनः ६ महिना पछि उनी कतार गए । तर, त्यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स नबनेपछि पुनः फिर्ता भएका थिए । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव पछि गठित संसदीय टोली सामु वार्ताका क्रममा वार्ता गरेर मूलधारमा आएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्द ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गठित टोलीसँग मनोज कुमार राय संयोजक रहेको भूमिगत समूहमा दिलिप कुमार राय, विजय साह (हाल जेलमा रहेका छन्), राम साहसँगै राय पनि वार्ता टोलीमा समावेश थिए । वार्ता पछि ती समूहसँग रहेको हातहतियार राज्यलाई बुझाउने क्रममा उनीहरुले कुल २७ वटा हतियारहरु बुझाएका थिए ।
प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट के खुलेको छ भने त्यतिबेला राज्यलाई हतियार बुझाउनका लागि पाँचै जनाले पाँच पाँच हजारको दरले नलकटुवा पेस्तोल किनेका थिए । तर भूमिगत हुँदा आफूसँग रहेका महँगो र अत्याधुनिक हतियार भने उनीहरुले राज्यलाई बुझाएनन् ।
वार्ताका माध्यमबाट मूलधारमा आइसकेको घोषणा गरे पनि रायले जीवनयापनका लागि भनेर पुनः अपराध कर्म रोजे । घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका धनुषाका प्रहरी सहायक निरीक्षक किस्मत भण्डारीका अनुसार पैसा कमाउनका लागि लुटपाट गर्ने उद्देश्यले धनुषा र सिरहाका युवाहरुलाई मिलाएर रायले एउटा संगठित गिरोह संचालन गर्ने योजना बनाएका थिए । त्यसका लागि सिरहाको डरौलमा बस्ने मनोज कुमार रायसँग मिलेर गिरोह बनाउन उनी सफल पनि भए ।
प्रहरीमाथि गोली प्रहार गरेको दिन (मंसिर १० गते) उनीहरुले बैंकबाट पैसा बुझेर आउने व्यक्तिलाई लुट्ने योजना बनाएका थिए । विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यले पठाएको पैंसा बुझेर घर फर्किनेबाट पैसा लुट्ने उनीहरुको योजना थियो । त्यसका लागि २–३ दिन अगाडिदेखि उनीहरुले बैंकहरुमा निगरानी समेत गर्दै आएका थिए । तर स्थिति अनकुल नदेखिपछि उनीहरु फर्किनेबेला प्रहरीको चेकिङमा परे र पक्राउ पर्ने डरले प्रहरीमाथि नै गोली प्रहार गरे ।
११ पुष २०७४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको अपराध अनुसन्धान शाखाको टोलीले ४ जना व्यक्तिको समूहलाई पक्राउ गर्यो । उनीहरु धनुषालगायत मध्य तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा चोरीका मोटरसाईकल लगायतका सवारी साधनहरुको नक्कली बिल बुक बनाई ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न थिए ।
पक्राउ पर्नेमा जनकपुर उपमहानगरपालिका–८ का ३८ वर्षीय संजय ठाकुर, धनुषाका २२ वर्षीय रहमद नदाफ, धनुषा औरही गाउँपालिका– १ का ३८ वर्षीय अरविन्द्र कुमार यादव र २७ वर्षीय सन्तोष मण्डल थिए । पक्राउ परेकाहरुमध्ये रहमद नदाफ पहिले पनि मोटरसाईकल चोरीको घटनामा पटक पटक पक्राउ परे पनि धरौटीमा रिहा हुँदै आएका थिए । उनीहरुले नेपाल र भारतका विभिन्न शहरबाट मोटरसाइकल चोरी गर्ने र नक्कली बिलबुक बनाएर बेच्ने गरेका थिए ।
पक्राउ परेकामध्ये संजय ठाकुर भने विगतमा भूमिगत सशस्त्र समूह लिवरेशन टाईगर अफ तराई इलम (एलटिटिई) मा आवद्ध थिए । मधेस आन्दोलन हुँदा २०६२÷०६३ तिर मधेसी जनअधिकार फोरममा आवद्ध भएका ठाकुर पछि भूमिगत समूह एलटिटिईमा लागेका थिए । सरकारसँगको वार्तामार्फत मुलधारमा आइसकेपछि ठाकुर जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको संयोजकत्वमा गठित तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान धनुषाका संयोजक समेत बनेका थिए । ठाकुरले असोज २ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठाकुर जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदावरी दिएका थिए ।
सजिलो काम : अपराध कर्म
माथिका दुई प्रतिनिधि घटनाले प्रमाणित गर्छ कि, विगतमा सशस्त्र समूह त्यागेर सामान्य जीवनमा फर्किएका भनिएका व्यक्तिहरु पुनः आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन थालेका छन् । भूमिगत गिरोहमा संलग्न भइसकेका व्यक्ति पुनः अपराधिक कार्यमा संलग्न हुँदा मध्य तराईका जिल्ला शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ ।
जीवनयापनका लागि अन्य विकल्प रोज्नभन्दा पनि उनीहरुका लागि अपराध नै सजिलो कर्म बनेको छ । तर केही बुद्धिजीविहरु भने राज्यको कमजोरी नीतिका कारण भूमिगत समूह त्यागेका व्यक्ति अपराधक कर्ममा फर्किएको बताउँछन् । वार्ताका माध्यमबाट सामान्य जीवनमा फर्किएका व्यक्तिलाई राज्यले निःशुल्क तालिम प्रदान गरी आय–आर्जनमूलक कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने बुद्धिजीविहरुको भनाइ छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी पनि काम गर्ने सीप नहुँदा उनीहरु पुनः अपराधिक कर्ममा फर्किएको स्वीकार्छन् । अनुसन्धानमा संलग्न सहायक निरीक्षक भण्डारी भन्छन्, ‘वार्ताका माध्यमबाट सामान्य जीवनमा फर्किएको त भनियो । तर उनीहरुसँग अन्य काम गर्ने सीप भएन । पैसा कमाउनका लागि उनीहरुले पुनः आपराधिक बाटो ने रोजेको देखियो ।’